Mahavaka, mahavalaka… | NewsMada
Andro fahatelo amin’ny heri­nan­dro masina, andro fahatelo amin’ny fihibohana faharoa, fe­petra goavana hiarovana amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19 izay mbola haharitra tapabolana, anio. Valabalaka, ketraketraka, vizambizana… ny rehetra. Nahoa­na tokoa moa ? Mitohy ihany ireo fepetra sy ny fahasahiranana sami­hafa aterak’izany. Tsy fahazoana mifamoivoy sy mivezivezy, fiatoan’ ny asa aman-draharaha, afa tsy ireo tena tsy azo hanoharana,… Ity no tena raharaha. Mahavaka sy mandrera-tsaina ny maro.
Mimenomenona, mimonomono­na ny ray aman-drenin’ny mpiana­tra itakian’ny talen-tsekoly saram-pianaran’ny ankizy. Ny sekoly anefa mikatona, ny mpianatra tsy mianatra. Efa tapabolana izay, ary mbola hisy tapabolana faharoa. Inona no karama omena sy hia­trehan’ny mpampianatra izao krizy izao ? Ireto farany koa anefa ma­nambady aman-janaka, mila sakafo isan’andro…
Ohatra iray amin’ny maro, isehoan’ny endriky ny fiantrai­kan’ny krizy aterak’izao fahameha­na sy fihibohana mihatra eto amin’ny firenena, noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ity izao. Mahavalaka, mahaketraka… ihany izany. Inona no ataon’ny fanjakana amin’izany ?
Etsy an-daniny anefa, tany amboalohan’ny fampiharana izao fahamehana izao ihany no nirodo­rodo sy nanao be fihavy ireo ma­nam­pahefana nanara-maso ny vidin-javatra. Ny vary izao no efa 2 800 Ar ny kilao. Miverina ka mahavaka sy mahaketraka ny maro indray ny fanararaotana ataon’ny sasany amin’ny fampakarana ny vidin’entana, indrindra ireo tena ilaina amin’ny fianana andavanan­dro. Na izany aza, herinandrom-panantenana izao herinandro ma­sina izao mialoha ny fankalazana ny fetin’ny paska izao. Paska famonjena !